Sidee ula dhaqmaan qaar ka mid ah Madaxweynayaasha Afrika cudurka coronavirus?… – Hagaag.com
28 Maajo 2020 in World // Banaanbaxyo ayaa ka socda Minneapolis oo looga soo horjeedo dil arxan daro ahaa oo booliska…
Posted on 4 Abriil 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
In kasta oo Coronavirus uu dilo kumanaan qof maalin kasta dalal badan, dareenka waxaa loo jeediyaa madaxda dalalka iyo boqorada kadib markii Rai’isul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo Amiirkii Boqortooyada Ingiriiska Prince Charles iyo Amiirka Monaco Albert II uu ku dhacay cudurka, iyo sidoo kale madax kale iyo xiddigo badan.
Afrika gudaheeda, Madaxweynayaashu waxay qaadeen dhammaan tilaabooyinka looga hortagayo infekshanka fayraska, sidaas darteedna waxay noqotay wax adag in lala xiriiro tiro ka mid ah madaxdaasi, tusaale ahaan, Madaxweynaha Cameroon Paul Biya kama uusan soo muuqan goob fagaare ah tan iyo 11-kii Maarso ee la soo dhaafay, lamana uusan hadlin muwaadiniintiisa sidii uu ugu wargelin lahaa arrimaha la xiriira tallaabada dowladda ee lagula tacaalayo cudurka coronavirus.
Joornaalka Jeune Afrique ayaa ku sheegay warbixin gaar ah in madaxweyne Biya uusan qabin cudurka, isla markaana uu doortay inuu joogo magaaladiisa Mvumica, oo qiyaastii 180 Km koonfur ka xigta caasimada Yaounde.
Dalka Ivory Coast, Madaxweyne El-Hassan Ouattara wuxuu aadaa xarunta madaxtooyada maalin kasta, kadib markii xafiisyadii oo dhami la nadiifiyo oo la buufiyo, wuxuuna xirtaa marada wejiga lagu xirto, sidoo kale wuxuu adeegsadaa cabitaanno nadiif ah iyo dhammaan shaqaalaha oo la baaro heer kulkooda.
Madaxweyne Ouattara wuxuu kula xiriiraa inta badan wasiirrada e-mail tan iyo markii uu ka dillaacay cudurka adduunka, kama soo muuqan fagaare labo jeer keliya mooyee, mar uu ka qeyb galay shirka Golaha Amniga Qaranka 16-kii Maarso, todobaad kadibna wuxuu khudbad u jeediyey dadkiisa.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Madaxweyne Felix Tshisekedi wuxuu yareeyay xiriirkii uu la lahaa kaaliyeyaashiisa ka dib markii mid ka mid ah uu u dhintey fayraska Corona, halka la-taliyihiisa gaarka ah, Vidye Tsiemanga, uu wali laga daweynayo cudurka coronavirus.
Dhanka Madaxweynaha Gabon, Ali Bongo, wuxuu shaqada ku wadaa meel fog oo kula xiriiro shaqaalaha Madaxtooyada iyo la taliyayaashiisa iyo Rai’isul wasaaraha asaga oo adeegsanayo kaamero.
Wadanka Congo, Madaxweynaha Denis Sassou Nguesso wuxuu go’aansaday in baaritaan caafimaad lagu sameeyo dhamaan caawiyayaashiisa, shaqaalaha ilaalada gaarka ah iyo mas’uuliyiinta madaxtooyada, si loo hubiyo inaanan qofna qabin cudurka.
Tallaabooyin adag ayaa waxaa qaaday Madaxweynaha Guinea, Alpha Conde oo go’aansaday inuu ku soo rogo xaalad caafimaad oo degdeg ah dalka oo dhan isla markaana xiray xuduudaha, oo ay weheliso tallaabooyin kale oo ay ka mid tahay in aanan gacmaha la isku salaamin, Sidoo kale waxaa lagu qabtay shirka golaha wasiirada hool aan aheyn hoolkii shirarka ee qasriga Madaxtooyadda.
Madaxweynaha Mali, Ibrahim Boubacar Keita, wuxuu yareeyey xiriirkiisa taabashada waxyaabaha agabka ah oo ay ku jiraan telefoonadiisa khaaska ah, iyadoo dhowr jeer jermiska laga buufiyo maalintii, sidoo kale feylasha la buufiyo intaan la hor geynin xafiiskiisa, Madaxweynaha Mali wuxuu xirtaa galoofyo ka hor inta uusan taaban wax dukumenti ah.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame wuxuu sii wadaa qabashada shirarka fool ka foolka ah, isaga oo u jirsanaya dadka masaafo gaar ah, wuxuu abuuray hey’ad khaas ah oo la dagaalanta saameynta cudurka coronavirus taasi oo hogaaminayo Rai’isul wasaare Edouard Ngirente.
Dalka Mauritania, Madaxweyne Mohamed Ould El-Ghazouani wuxuu yareeyay inta jeer ee kulamada wuxuuna ku koobay tirada ugu yar ee suurtagalka ah ee kaaliyeyaashiisa, wuxuuna ku khasbay dadka soo booqanaya inay xirtaan maaskaro ilaalin ah, galoofyo, iyo inay gacmahooda ku dhaqaan dareere gaar ah.
Hadaba Xaalada Madaxweynaha Somalia waa sidee, siduu ula noolyahay xaaladan cakiran ee heysata adduunka ee cudurka coronavirus.
About Admin (10142 Articles)